माओवादी Archives • Nepal's Trusted Digital Newspaperमाओवादी Archives • Nepal's Trusted Digital Newspaper
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज बुधबार गृह जिल्ला चितवन आउँदै छन् । पछिल्लो १३ दिनको अवधिमा प्रचण्ड तेस्रो पटक गृह जिल्ला आउन लागेका हुन् । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा गृह जिल्लामा उनको आगमन बढेको मात्रै छैन, योजनाहरुको शिलान्यास, उद्घाटन र पार्टीका कार्यक्रममा उनलाई भ्याइनभ्याइ छ । आज पनि […]
धर्मराउँदै टिकेको कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन र एमालेबीच स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित भएको छ । एमाले कमजोर नभएको निष्कर्षका आधारमा गठबन्धन बनेको हो । भन्न चाहिँ गठबन्धनमा रहेका पार्टीका नेताहरू एमालेलाई लक्षित गर्दै प्रतिगमनकारी शक्तिलाई पराजित गर्न गठबन्धन गर्नुपरेको बताउँछन् । जसरी र जुन आधारमा गठबन्धन बने पनि सैद्धान्तिक रूपमा मेल नभएका पार्टीहरूबीच […]
दोधारमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीः न कांग्रेसको साथ, न एमालेको विश्वास
आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक्लै जान डराइरहेका छन् सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) । निर्वाचन प्रचारप्रसारको अभियानमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले उनीहरुलाई छोडेर निकै अघि बढिसकेको छ । भन्नलाई माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले गठबन्धन चिर्वाचनसम्म नै कायम रहने भन्दै आएका छन् । तर व्यवहारमा त्यो […]
पार्टीले नै कलाकारलाई ओझेलमा पार्‍यो
जंगल धाउने चेलीहरू हिमाल चढ्ने आँट गर बच्चा पाउने मेसिन होइन संर्घषशील नारी बन आधा संसार यो धर्ती हाम्रै हो चिन्ता नगर सुन्दर तिम्रा पौरखी हात देशका निम्ति अर्पी हिँड चुलो चौको होइन अब बम बारुदका झोला भिर आधा संसार यो धर्ती हामै्र हो चिन्ता नगर कुनै बेला यस्तै यस्तै गीत गाउँघरमा निकै घन्किन्थे । […]
प्रकाश सपूतको ‘पिर’ सँग डराएको माओवादी
गीतको भाषा हुँदैन, न सीमा नै । सर्जकले आफूलाई कहाँसम्म राखेर सृजना गर्न सक्छ भन्ने कुरा उसको सृजनाको श्वासले बोल्दछ । परिवर्तनको नाममा गीत बने, जो आज पनि सुन्दा आनन्द आउँछ । तर परिवर्तन सम्झदा के आउँछ मनमा ? यसको जवाफ कोसँग हुन सक्छ ? प्रकाश सपूतले एक गीत ल्याए । सामाजिक सञ्जालमा तरङ्ग […]
माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज साेमबार पनि बस्दैछ । बैठक बिहान ११ बजे अनुपम फुडल्याण्डमा बस्ने माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिए । माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठक गत शुक्रबारबाट सुरु भएको हो । आइतबार दुईपटक सारिएको बैठक आज बस्न लागेको हाे । आजको बैठकमा केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता, पोलिटव्युरो, स्थायी कमिटी गठन […]
माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठक आज पनि
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज आइतबार पनि बस्दैछ । बैठक बिहान ११ बजे बस्ने माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिए । माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठक गत शुक्रबारबाट सुरु भएको हो । आजको बैठकमा केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता, पोलिटव्युरो, स्थायी कमिटी गठन लगायतका एजेण्डामा छलफल हुने उनले बताए । माओवादीले पदाधिकारीसँगै स्थायी […]
व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णयले माओवादीभित्र बढायो असन्तुष्टी
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेपछि पार्टी भित्र असन्तुष्टी बढेको छ । माओवादीका केही नेताहरुले पार्टीको निर्णयप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै गम्भिर असहमति प्रकट गरेका छन् । ‘पाँच दलीय गठबन्धनमा अध्यक्ष प्रचण्डले ब्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने जानाकारी गराउनु भएको छ । यो निर्णयप्रति मेरो गम्भीर […]